Izeluleko Zokusebenzisa Izingcingo Zomphakathi kanye ne-Payphones-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Amathiphu wokusebenzisa Izingcingo Zomphakathi kanye nama-Payware
Isikhathi: 2020-06-09 Hits: 10
Ibanga elide namanani endawo akhokhiswa kusuka ukhokhenezinye izingcingo ezisezindaweni zomphakathi ezinjengamahhotela, izibhedlela nezikhumulo zezindiza kungahluka, futhi kungahle kube phezulu kakhulu. Ngaphambi kokusebenzisa ifoni yomphakathi noma i-payphone, yazi ukuthi yini okufanele uyilindele.
1.Be phone smart: wazi amalungelo akho
I-FCC, kanye nezifundazwe, bavikela abathengi besebenzisa izingcingo zomphakathi nezinkokhelo ezinemithetho ebhekana nalokhu:
Izingcingo eziphuthumayo: Abahlinzeki bensiza yokusebenza kufanele baxhume amakholi we-911 ngokushesha ngaphandle kwenkokhiso.
I-TRS: Izingcingo zasendaweni eziya kuzinsiza ezedluliselwa ngocingo - izinsizakalo ezinikeza izingcingo eziya noma ezivela kubantu abayizithulu, okunzima ukuzwa noma abakhubazekile ukukhuluma - zenziwa mahhala ngamafoni.
Ukushayela nxazonke: Ungabeka izingcingo kusuka kwifoni ekhokhelwayo noma enye ifoni yomphakathi ngokusebenzisa ibanga elide lenkampani oyikhethile ngokusebenzisa ikhodi yokufinyelela ukuze ushaye uzungeze ifoni noma umhlinzeki ngocingo womphakathi. Ukushayela nxazonke kungasho ukudayela inombolo engu-800, inombolo yendawo eqala ngo-950, noma inombolo yokufinyelela enamadijithi ayisikhombisa eyaziwa njengenombolo ye-101-XXXX noma engu-10 10 XXX. Umthetho wamasheya wenqabela ukuvimba lezi zinombolo zokufinyelela ezinkampanini ezikude kusuka kuzingcingo zomphakathi.
Akuxhunywanga: Abahlinzeki bensiza ye-Opharetha abakwazi ukukhokhisa ngamabomu izingcingo ezingaphendulwanga.
Amanani wendawo: Amazwe amaningi ayaqhubeka nokulawula amanani ezingcingo zokuqoqa zasendaweni. Hlola ikhomishini yakho yokusebenzisa umphakathi noma inkampani yocingo yendawo ukuthola amanani.
Imininingwane yabanikezeli bezinsizakalo: Abahlinzeki ngocingo bakahulumeni kufanele babhale ngokubona okusobala noma kufushane ngocingo ngalunye igama, ikheli kanye nenombolo yamahhala yomhlinzeki wesevisi.
Izingcingo ezingakhokhelwa: Izingcingo eziya ezinombolweni ezingakhokhelwa, kufaka phakathi izingcingo ezikhokhiswa amakhadi wokushayela noma amakhadi wesikweletu, azidingi uhlamvu lwemali. Ungafinyelela ku-opharetha ngaphandle kokufaka uhlamvu lwemali.
2.Uma wenza ucingo
Lalela ngemuva kokushayela inombolo oyishayelayo ukuthola ukuthi yimuphi umhlinzeki wesevisi ophethe ucingo lwakho. Umhlinzeki wesevisi kufanele aziveze wena ekuqaleni kwekholi ngaphambi kokuba ucingo luxhumeke futhi likhokhwe. Uzobe utshelwa ukuthi ungalufunda kanjani inani lentengo yocingo - kufaka phakathi noma yimiphi imali ekhokhwayo - ngokucindezela kungabi ngaphezu kwamadijithi ayi-2, noma ngokuhlala kulayini.
Ngaphandle kokuthi usebenzise izinhlamvu zemali ukukhokhela ucingo, umhlinzeki wesevisi opharetha uzokudinga ukuthi ushayele ucingo ekhadini lokushaya noma ikhadi lesikweletu, ukuqoqa izingcingo noma ukukhokhisa umuntu ovela eceleni.
Imboni Yezokuxhumana yeXiangLong inikeza izinhlobo eziningi zekhwalithi ephezulu, engangenisi manzi, evikela umphakathi i-payphone handsets futhi ikhiphedis. Zonke izinto eziphathwayo zenziwe ngezinto eziqinile ze-PC / ABS. Zonke izinkinobho zenziwe insimbi engagqwali or i-zinc alloy. Ingaphezulu le-inkinobho, isakhiwo kanye nephethini kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Okwedlule: 4x4 Metal Keypad Kufakwe Tiffany & Co. Vending Machine eLondon
Okulandelayo: I-Metal Keypad efakwe ku-Self-service Kiosk eDenmark